के श्रृङ्खला र सिसनले प्रेम स्विकार गर्न भ्यालेन्टाइन नै पर्खिएका हुन् त् ? | के श्रृङ्खला र सिसनले प्रेम स्विकार गर्न भ्यालेन्टाइन नै पर्खिएका हुन् त् ? – हिपमत
के श्रृङ्खला र सिसनले प्रेम स्विकार गर्न भ्यालेन्टाइन नै पर्खिएका हुन् त् ?
पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडा र भ्ल्गर सिसन बाँनियाको प्रेम चर्चा चलेको केही समय भयो । केहि समय अगाडी श्रृङ्खला मिस नेपालको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुँदै गर्दा उनलाई सिसनले खुबै साथ दिएका थिए । त्यसै समय देखि यता श्रृङ्खला र सिसनको प्रेम चर्चा सुरु भएता पनि । सिसन र श्रृङ्खलाले आफ्नो प्रेम स्विकार गरेका थिएनन् । सामाजिक संजाल र मिडियामा लामो समयदेखि यी दुइको प्रेमको खबर सार्वजनिक भएपनि यी दुई मौन नै बसेका थिए ।
श्रृङ्खलाले घुमाउरो शैलीमा सिसनसँगको प्रेम स्विकार गरेको वुझ्न सकिन्छ भने श्रृङ्खलाको सो भिडियोको पछाडि सिसन मुस्कुराएका छन् । सायद, यो जोडीले प्रेम स्विकार गर्नका लागि प्रेम दिवसलाई नै कुरेको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान समेत गर्न सकिन्छ ।